Saturday January 05, 2019 - 21:11:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay hoggaamiyaha dowladda dabadhilifka Masar ayaa qiray in maamulkiisu uu isku xir dhanka amniga ah oo heerkiisu sarreeyo uu laleeyahay yahuudda Sahyuuniyadda ee xoogga ku heysata dhulalka Filasdiin.
Cabdi Fataax alsiisi ayaa wareysi uu siiyay Telefeshinkadda CBS News ee laga leeyahay dalka Mareykanka wuxuu ku sheegay in dowladda Masar ka jirta ay is kaashi dhanka amniga ah la sameysay Yahuudda ayna iska kaashanayaan ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxsida oo uu ula jeedo ladagaallanka muslimiinta.
inta uu wareysigu socdo ayuu xaqiijinayaan in ciidanka cirka yahuudda iyo kuwa Masaarida ay si wadajir ah uga qeyb qaataan duqeymaha lagu xasuuqayo shacabka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka saxara u ekaha Saynaa.
mar laweydiiyay waqtiga uu soo billaawday xiriirka dhanka ammaanka ah ee dowladdiisu laleedahay Yahuudda ayuu sheegay in uu yahay mid soo jireen ah balse maamulkiisu uu sare usii qaaday.
Dagaal ooge Cabdi Fataax alsiisi ayaa beeniyay in xabsiyada dowladdiisa ay ku xiranyihiin dad loo heysto arrima siyaasadeed, balse hay'adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in dad ka badan 60-kun oo maxaabiis ah oo arrima siyaasadeed loo heysto ay ku xiranyihiin xabsiyada nidaamka.
Caddeymahan uu bixiyay Alsiisi ayaa adkeynaya warbixinno horay usoo baxayay oo sheegayay in nidaamka dabadhilifka ah ee kajira magaalada alqaahira uu cilaaqaad dhan walba ah la leeyahay yahuudda sahyuuniyadda
Ogeysiis: Barnaamij ku saabsan sida ay usoomaan Muslimiinta Caalamka oo Maalin walba aan soo gudbin doono.
Farmaajo Oo xaqiijiyay in Dhaqaala xumo baahsan ay soo wajahday DF-ka.